Iza kudibana noLee (kufuphi nesitalato sabahambi ngeenyawo) igumbi lomgangatho ophezulu wokunyuka - I-Airbnb
Iza kudibana noLee (kufuphi nesitalato sabahambi ngeenyawo) igumbi lomgangatho ophezulu wokunyuka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu九六
U九六 unezimvo eziyi-37 zezinye iindawo.
Kwenziwa zonke iinzame zokuzanelisa. Eli gumbi lineprojektha, umatshini wokuhlamba impahla, yaye kumgama oziimitha ezili-1 000 ukusuka kummandla ojikelezileyo, kukho iWanda Plaza, ipaki yomgxobhozo, kunye nevili likaFerris. Isikolo samabanga aphantsi ngolwimi lwasemzini.
Inommandla oziskwemitha ezingama-60, igumbi lokulala elinye, igumbi lokuhlala elinye kunye negumbi lokuhlambela elinye, kukho umatshini wokuhlamba kunye ne-air-conditioning. Itafile yekofu yesofa
I-Aocheng ikumgama weemitha ezingama-500 ukusuka eWanda Plaza kwaye kukho isikolo saseprayimari solwimi lwasemzini ecaleni kwayo. I-Wetland Park ikumgama weemitha ezingama-300, kwaye ivili likaFerris likumgama weemitha ezili-1,000. Iluncedo kakhulu
Umbuki zindwendwe ngu- 九六
Ngexesha lothintelo lobhubhane kunye nexesha lolawulo, sibonelela ngokungena ngaphandle koqhagamshelwano ukukunika amava akhuselekileyo. Ukuba unayo nantoni na onokuqhagamshelana nayo kwangaphambili, njengokupheka okanye into
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Suining